Isamsung Samsung Galaxy S6: Uphengululo lweVidiyo kunye noHlaziyo Iindaba zeGajethi
Uphengululo lweVidiyo kunye nohlalutyo lweSamsung ye-Samsung S6
UPablo Ortega | | ngokubanzi, Iiselfowuni, Reviews, Umnxeba
NgoLwesihlanu i Samsung Galaxy S6 kumazwe aliqela (kubandakanya iSpain ne-United States). Umsebenzi wefowuni we-AT & T usinike itheminali ebesikwazi ukuyivavanya kwimpelaveki yonke. I-Samsung Galaxy S6 iba yiyo eyona fowuni ilungileyo evela kumenzi waseMzantsi Korea ukuza kuthi ga ngoku, ngenkangeleko isikhumbuza nge-iPhone 6, kunye neprosesa enamandla ebeka ibha phezulu. Sihlalutya iflegi entsha ye-Samsung.
3 Isoftware, i-Samsung Pay kunye neminwe yeminwe
Eyona nto indibethileyo malunga ne-Samsung Galaxy S6 ngaphandle kwebhokisi kukugqitywa kwayo. Ezo zimbombo zijikeleziweyo, ezo nkcukacha kwimiphetho yesinyithi kunye neziphelo zentsimbi ngokwazo ndikhumbuze enye ifowuni yam: i-iPhone 6. Ukuthelekisa ezi nkampani zimbini ziphikisanayo, kwakhona, akunakuphepheka. Kwaye ukufana akufumaneki kuphela kwifowuni: i-headphone ye-Galaxy S6 ijongeka ngokungathandabuzekiyo njengee-EarPods zika-Apple. Kufuneka sigxininise, ewe, ukuba uyilo lwe-Samsung Galaxy S6 iyamangalisa. Umphambili nomva ziiglasi (ngeGorilla Glass 4). Ukugqitywa kwesafire emnyama (yile nto sikubonisa yona kwividiyo) ijongeka intle emntwini. Okokugqibela i-Samsung izibophelele kwizixhobo ezomeleleyo nezintle (i-foray yokuqala kule ndawo yenziwe ngeGlass Alpha).
Ifowuni iziva ilungile ezandleni, ezinobukhulu obuyi-143,4 x 70,5 x 6,8 mm kunye nobukhulu obuyi-138 gram. Inkalo ekuphela kwayo engalunganga yoyilo ifunyenwe ngasemva, kunye nekhamera enamathele ngaphandle kweglasi.
Isixhobo siyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo: ngesafire emnyama, mhlophe, luhlaza kunye negolide. Le modeli ayinamanzi (eyangaphambili, i-Samsung Galaxy S5, ibiyiyo).
Kwakhona, iSamsung iphinde yabeka ibha ephezulu kwabo bakhuphisana nayo. Inkqubo ye- I-Samsung Galaxy S6 sisiphelo esinamandla, apho ezinye izinto ziye zenziwa idini, ezinje ngomthamo webhetri kunye nokwenzeka kokonyuka kokugcinwa komzimba, kodwa ihamba kakuhle. Isamsung isebenzise iprosesa eyenzelwe ekhaya i-Exynos enee-cores ezisibhozo kunye nesakhiwo se-64bit. Imemori I-RAM yi-3GB.
Isikrini siyigcina I-megapixels ze-5,1, kodwa iphakama kumgangatho ngokudibanisa isisombululo sama-pixels angama-2560 x 1440 kunye noxinano lwama-pixels angama-557 nge-intshi nganye. Esi sesona sikrini sihle kwintengiso ye-smartphone, into enokuthi ilunge okanye hayi. Okokuqala, iliso lomntu alinakukuqonda oko kusonjululwa, kwaye okwesibini, ubomi bebhetri buphazamisekile.
La Ikhamera iseyeyona nto iphambili kwi-Samsung. Ngasemva inelensi ye-16-megapixel, ezinomfanekiso ozinzileyo kunye nokukwazi ukurekhoda ividiyo ngomgangatho we-2160-pixel. Ikhamera yangaphambili zii-megapixels ezi-5. Nangona umgangatho wemifanekiso ethathwe kwiindawo ezinokukhanya okuphantsi uphuculwe, eli candelo lisadinga ukuphuculwa.
Kwisebe lebhetri kufuneka siqikelele ukuba umthamo ngaphantsi kwe-Samsung Galaxy S5, 2550 mAh, kodwa sisafumana usuku lonke lokusebenza. Singayitshaja ngokutsha le Samsung S6 ngokukhawuleza ngesiseko esingenazingcingo (ngemizuzu engama-20 yokutshaja siya kufumana iiyure ezine zobomi bebhetri).
Isiphelo sinokuthengwa ngokuma kwe 32GB, 64GB okanye i-128GB, ukugcinwa esingenakuphinda sikwandise, kuba umfundi we-microSD akafakwanga.
Isoftware, i-Samsung Pay kunye neminwe yeminwe
I-Samsung Galaxy S6 yazisa ngenkqubo yokusebenza Android Lollipop kunye neendlela zakho eziqhelekileyo zokujongana nezinto. Kwimeko yethu, izicelo ezifakwe kwangaphambili ezivela kuGoogle nakwi-AT & T zibandakanyiwe (ngeli xesha i-Samsung ithathe isigqibo sokubheja ngakumbi kwizixhobo zeinjini yokukhangela, ngaphandle kwento yokuba ngaphambili ibonakalise iimpawu zokufuna ukuzishiya kude nenkampani yaseMelika).
Ngaphakathi kwisiphelo sendlela sifumana Inketho yokuhlawula i-Samsung, apho sinokugcina khona amakhadi ethu etyala kunye nomnxeba siwusebenzise xa sihlawula. I-Samsung Pay sisixhobo esitsha sokuhlawula esidityaniswe ngokukodwa kwi-Galaxy S6 kunye ne-Galaxy S6 Edege.
Inxalenye efumene Uphuculo olufanelekileyo lube ngumtshini weminwe. Kwi-Samsung Galaxy S6, akusafuneki ukuba islayidi ngomnwe wethu ukusuka ezantsi kwesikrini uye kwiqhosha lasekhaya. Kuya kwanela ukuba nomnwe wethu kuloo qhosha. Inkqubo ilula ngoku kwaye iminwe iya kwaziwa ngokukhawuleza. Ngamanye amaxesha iimpazamo zokufunda zisenzeka.
I-Samsung Galaxy S6 sele ifumaneka kumazwe aliqela ngobuchule bokugcina obuyi-32GB, 64GB kunye ne-128GB. ESpain sinokuyifumana kuyo 699 euro.
Ibhetri inokutshajiswa ngokukhawuleza ngesiseko esingenazintambo
Ikhamera inamathele ngasemva
Asinakwandisa ukugcinwa komzimba nge-microSD
Ayinakungena kwaye ibhetri ayinakususwa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Uphengululo lweVidiyo kunye nohlalutyo lweSamsung ye-Samsung S6
Ewe: yinto entle yokudlala.
I-intanethi ijongeka intle kakhulu, kuyo. Unokuhamba nge palante kunye ne patrás kwaye ufunde zonke iindaba.
Kwaye uthumela ii-imeyile kuye nakubani na omfunayo kunye nazo zonke iileta ozifunayo.
Into endiyithethayo kukuba kule minyaka idlulileyo kubonakala ngathi yile nto umthengi ayifunayo: intle kakhulu.
Ukusebenza kwazo KUFANELEKILE njengoluhlu oluphakathi okanye nakwi-smartphone esezantsi (kulungile, mhlawumbi ngekhe udlale umdlalo wamva nje, ofuna ii-cores ezi-8 ... kodwa akukho mntu udlala nge-smartphone ...)
Kwaye ukuba akunjalo, jonga into exelelwa inqaku: eyona intle ngaphandle, kwaye ngokufanayo ngokufanayo nabanye ngaphakathi.
Isefowuni ebiza kakhulu ye-android ye-li ezisa elo xabiso libhetele ndithenga i-iphone 6
Ukusuka kwinto endiye ndakwazi ukuyichaza, emva kokusebenzisa ezi nkqubo zimbini ndizithelekisayo xa ndenza ingxelo, loo Android ifuna amanyathelo amaninzi okusombulula imeko, engenzeki ngeBlackberry OS 10.3. Into eyaziwayo ngabantu abambalwa
Molo, ngenxa yeempawu zobuchwephesha, ijongeka intle kakhulu, iphuculwe. Yintoni eya kuba yinto elungileyo ukuyazi ukuba ayikoyisi ipasipoti yeBlackberry, nokuba ibhetri ayisebenzi. Mhlawumbi kungenxa yokuba inkqubo yokusebenza inamanyathelo amaninzi kakhulu okuthatha xa usombulula imeko
Mntundini Kombat X uhlalutyo
Iinkqubo ezi-5 ezizezinye zeFacebook Messenger